Anoshamisa Tanzania Novelist Akapihwa Mubayiro weNobel weMabhuku
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Tanzania Breaking News » Anoshamisa Tanzania Novelist Akapihwa Mubayiro weNobel weMabhuku
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • tsika nemagariro • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • Tanzania Breaking News • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Mubayiro weNobel Mubayiro uye munyori wenhau kuTanzania Abdulrasak Gurnah
Mutori wenhau weTanzania Abdulrasak Gurnah akaburitsa zvinyorwa gumi uye nyaya pfupi zhinji, zhinji dzichitevedzera hupenyu hwevapoteri pavanenge vachiita nekurasikirwa nekushungurudzika kunokonzerwa nekoloni yeEuropean yekondinendi yeAfrica, chimwe chinhu icho munyori akararama nacho. Akatumidzwa iyo 10 Nobel Prize yeMabhuku.
Paaive muhutapwa, Abdulrasak Gurnah akatanga kunyora senzira yekutsungirira kushungurudzika kwekubva kumusha kwake.
Akave izwi rakakosha rezviitiko uye nhoroondo yepashure European colonialism kukondinendi ye Africa.
Iye ndiye mubairo wekutanga wemu Africa kuzotumidzwa zita reNobel Prize yeLitori chikamu kweanosvika makore makumi maviri.
Gurnah akaberekwa muna 1948 kuZanzibar. Pakusunungurwa kubva kuBritain Humambo muna 1963, Zanzibar yakapfuura nekumukira kwechisimba kwakakonzera kutambudzwa kwevadiki veArabhu. Kuva nhengo yedzinza rakanangwa, Gurnah akamanikidzwa kupotera muEngland aine makore gumi nemana. Paive panguva yekutapwa ndipo paakatanga kunyora senzira yekutsungirira kushungurudzika kwekubva kumusha kwake.
Gurukota rezvekunze kweGerman, Heiko Maas, akapa chirevo musi waGumiguru 7, 2021, pamusoro pechisarudzo chakaitwa neNobel Committee yekupa Mubayiro weNobel wemabhuku kuna Abdulrazak Gurnah. Chirevo chinoti:
“Nemunyori weTanzania, Abdulrazak Gurnah, harisi izwi rinokosha chete rekuti post-colonialism iremekedzwe, asi ndiye zvakare mubairo wekutanga muAfrica muchikamu ichi mukati memakumi maviri emakore. Mune ake enganonyorwa uye nyaya pfupi, Gurnah anotaura nezvenhoroondo yekoloniyalizimisi pamwe nezvazvinoita kuAfrica, izvo zvinoramba zvichizviita kuti zvinzwike nhasi - kusanganisira basa rakaitwa nevatongi vechiGerman. Anotaura zvakajeka achipokana nerusarura uye rusaruraganda uye anotidhonzera kutariso rwekuzvipira asi rusingaperi rweavo vanonanga kune imwe nyika.
"Ndinoda kupa Abdulrazak Gurnah makorokoto angu echokwadi nekuhwina mubairo weNobel weLitori - mubairo wake unoratidza kukosha kwenhaurirano ine hupenyu uye yakafara yenhaka yedu yekoloni ichienderera mberi."
The African Tourism Bhodhi (ATB) akaziva kubudirira kwaAbdulrasak Gurnah, uye Mutungamiri weATB Alain St. Ange ane izvi zvekutaura:
“Isu veAfrican Tourism Board tinokorokotedza munyori anoverengeka wekuTanzania, Abdulrazak Gurnah nekupihwa mubairo weNobel Prize weZvinyorwa mugore ra2021. Akaita kuti Africa idade. Kubudikidza nebudiriro yake anoratidza kuti Africa inogona kupenya uye kuti pasi rinongoda kusunungura mapapiro emumwe neumwe wemu Africa kuti tibhururuke. ”
Mutungamiri weAfrican Tourism Board anga achimanikidza kuti Africa inyorwe nhoroondo yayo uye haatombopotsa mukana wekudzokorora kudana uku, achiti izvo kiyi USPs ye Africa inogona kutaurwa zvakanyanya nevaAfrica.
ATB iri kuenderera mberi nekukurudzira kuti Africa ibatane seyekugadzirira kuvhurwa zvizere kweindasitiri yekushanya.
Gurnah parizvino ari purofesa anobuda muChirungu uye postcolonial zvidzidzo kuYunivhesiti yeKent.
Kurwiswa kwehugandanga kuri kuitika muUganda